အမြင့်ပါဝါနဲ့ LED ဖလက်ရှမီးရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
စွမ်းအင်ချွေတာသောကွောငျ့, ကတူညီတဲ့ပါဝါအောက်မှာပိုပြီးနာရီကြာရှည်နိုင်ပါတယ်, illumination ဧရိယာထဲမှာ ပို. ပို. လူကြိုက်များလောင်ဖြစ်လာ, ဒါကြောင့် flash ကိုအလင်းအဘို့ကိုလည်းအလွန်ကောင်းသော LED ။ အဘယ်သို့ကောင်းတစ်ဦးလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုရှေးခယျြဖို့နဲ့ LED ဓာတ်မီးကိုဝယ်ချင်သူကလူများအတွက်အများဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ LED အရေအတွက်ကို sh ... : 1. အရေအတွက် LED
LED ကိုအလွန်အထိခိုက်မခံအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်တယ်, ဒါသိုလှောင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကာလအတွင်းအလွန်သတိထားရှိရမည်, မဟုတ်ရင်က damp နဲ့ LED, ထိုးဖေါက်ခြင်းသို့မဟုတ်သေစေပါလိမ့်မယ်။ နှင့်ပြဿနာအယ်လ်အီးဒီအများကြီးသာပါသည်စဉ်အတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သိုလှောင်မှု: အစိုဓာတ်ကိုစုပ်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူ 1. စိုအထောက်အထားနဲ့ anti-electrostatic အထုပ် ...
Refresh Rate ကိုနှင့်ဘောင်နှုန်းမှာဘာတွေလဲ?
အဆိုပါ Refresh Rate ကိုတစ်ဦး display ကိုရဲ့ image ကိုတစ်စက္ကန့် repainted သို့မဟုတ်သက်သာစေခြင်းဖြစ်သည်အကြိမ်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးအကြိမ်ရေရည်ညွှန်းသကဲ့သို့, Refresh Rate ကိုဟတ်ဇအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ ဒါက 75 Hz တစ် Refresh Rate ကို image ကိုတစ်စက္ကန့်အတွင်း 75 ကြိမ်လန်းဆန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်အဘို့အအသုံးအများဆုံးလတ်ဆတ်တဲ့နှုန်း ...
LED မျက်နှာပြင်များအတွက်စကင် mode ကိုကဘာလဲ?
LED Display ကို၏ scanning mode ကိုရဲ့သူကအလုပ်မလုပ်ဘူးသောအရာကိုလူများစွာရောထွေး? ဤရွေ့ကား, LED မျက်နှာပြင်များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေဘာလဲ ဒီနေရာတွင်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေး: တစ်ခုချင်းစီကို 16 တံသင်ရှိသည်, အရှိဆုံးမှာ 16 LED chip ကိုမောင်းနိုင်ပါတယ် IC မောင်းတယ်။ static drive ကို mode ကို LED က module တစ်ခုပေါ်မှာရှိသမျှအယ်လ်အီးဒီဆို t ကိုမှာ IC တို့ကမောင်းနှင်နေကြသည်ကိုဆိုလိုသည် ...
အားလုံးဟာ Optimum ကြည့်အကွာအဝေး
ဦးဆောင်မျက်နှာပြင်၏အားလုံးဟာ Optimum (အကောင်းဆုံး) ကြည့်ရှုအကွာအဝေးဟာဦးဆောင် Display ကိုမျက်နှာပြင်နှင့်မျှမတို့အရောင်သွန်းကိုစောင့်ကြည့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအမြင်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပရိသတ်ကိုပေးကြည့်အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော pixel အစေးခြင်း, SC အဖြစ်များလွန်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအချက်များ, ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒီသတ်မှတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည် ...
ထောင့်ကိုကြည့်ရှုခြင်းတစ်ဦး display ကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်အမြင်အာရုံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်မှာအများဆုံးထောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလျားလိုက်ကြည့်ရှုထောင့်နှင့်ဒေါင်လိုက်ကြည့်ရှုထောင့်တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါပုံ, အဖော်ပြထားကြည့်ရှုထောင့်အကွာအဝေးအပြင်ဘက်မှုန်ဝါးသို့မဟုတ်လွန်းမော, ဆင်းရဲသောဆနျ့ကငျြဘ၏, ညံ့ဖျင်းပြည့်, garbled ထင်ရပေမည် ...
ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ရှင်းပြချက် (egIP65)
Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (IP) လျှပ်စစ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဝင်းတို့ကထောက်ပံ့ပေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဒီဂရီကိုဖော်ပြထားတယ်တဲ့ဥရောပအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်က IP ကိုဂဏန်းနှစ်လုံးအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်စာလုံးပါဝင်ပါသည်: ပထမဦးဆုံးအရေအတွက်ကအစိုင်အခဲနိုင်ငံခြားအရာဝတ္ထု ingress ဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဒီဂရီဖော်ပြသည်။ T က ...
SMD နှင့် DIP ၏ Difference ကဘာလဲ?
SMD လည်း Smt (မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားနည်းပညာ) အမည်ရှိအဆိုပါ SMD မီးခွက် PCB ဘုတ်အဖွဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် soldering ဖြစ်ပါတယ်။ SMD display ကိုမိုးလုံလေလုံစီမံကိန်းများအတွက်အသုံးများဖြစ်ပါတယ်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အခုအချိန်မှာလည်းပြင်ပတွင်စီမံကိန်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြင်ပ SMD display တွေနှစ်ပေါင်းစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူအလုံအလောက်ရင့်ကျက်, IP65 ရေအထောက်အထားများမှာဦးဆောင်ခဲ့သည်။ DIP (dual- ...
LED Display ကိုအလင်းသတင်းရပ်ကွက်များအကြားကွာခြားချက်များ
အဆိုပါ LED အလင်းအရင်းအမြစ်မျက်နှာပြင်၏ထောင့်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကြည့်ရှုအရောင်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု, အရောင်အဝါ, ဆုံးဖြတ်သည်ရာနဲ့ LED Display ကိုစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် key ကိုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင် dot matrix, DIP နှင့် SMD အကြားခြားနားချက်အလင်းအရင်းအမြစ် LED မိတ်ဆက်ပေး။ 1. Dot matrix ကို module: ဒါဟာ int ကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲ, ဟောင်းဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ် ...
နိမိတ်လက္ခဏာ program ရန်ခက်ခဲလား?
အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ အများဆုံး display ကိုအသုံးပြု programming ကိုလက်-ကျင်းပဝေးလံခေါင်သီသုံးပြီးပြုမိသည်အဘယ်သူမျှမကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အထူးဆော့ဖ်ဝဲကိုလိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါအဝေးထိန်းအထိ 25 ခြေဘဝါးကွယ်ပျောက်ခြင်းမှနိမိတ်လက္ခဏာ program သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ display ကိုဝေးလံခေါင်ဖျားသို့မဟုတ် software ကိုသုံးစွဲဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွယ်ကူသောဖြစ်စေသုံးနိုင်သည်။
ပြည့်အရောင်ကို LED Display ကိုအရည်အသွေးထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
LED အစိတ်အပိုင်းများကိုအပြည့်အဝအရောင် LED display ရဲ့အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယင်း LED အစိတ်အပိုင်းများကိုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်အောင်ကောင်းတစ်ဦးအပြည့်အဝ color display ပါ LED စေရန်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝ color display ပါ comp LED အမျှ 1) ပျက်ကွက်မှုနှုန်း ... : အစိတျအပိုငျးအရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့ငါးအရေးကြီးသောညွှန်းကိန်းရှိပါတယ်
ထုံးစံ display ကိုအဘယျသို့ LED သလဲ?
AeroV စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုပူဇော်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော application ကို-စိတ်ကြိုက်သူတို့ကအလွယ်တကူထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဒါအသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်နှင့်မစဉ်းစားနဲ့အခြားရှုထောင့်အရသိရသည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်သည့် display, LED ကိုက်ညီမှထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ၏သင်တန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအီလက်ထရောနစ် equi ၏ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည် ...
Indoor Led Video Wall, ဦးဆောင်ပြီး Display ကိုမျက်နှာပြင်ဗီဒီယိုအမှတ်တရ Billboard , Seamless Led Video Wall, Waterproof Led Screen, Led Display Billboard, Led Outdoor Advertising Board,